ဟန်.. ကိုယ့်ဖို့ နဲ့မာန်တင်းခဲ့ရသူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဟန်.. ကိုယ့်ဖို့ နဲ့မာန်တင်းခဲ့ရသူ
ဟန်.. ကိုယ့်ဖို့ နဲ့မာန်တင်းခဲ့ရသူ
Posted by candle . on Jul 15, 2013 in Creative Writing | 28 comments
တစ်ခြမ်းထူ တစ်ခြမ်းပါး ဖြစ်နေတဲ့ သူ့ ရုပ်လွှာ
” ဆူးလေရောက်ပြီ ” စပယ်ယာလေးရဲ့ အသံ
ကျမ အဓိပတိ အထူးလိုင်းကားပေါ်က ဆင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ လူလေးငါးယောက်ခန့်ဘေးနားကို ဝိုင်းကပ်လာပါတော့တယ် ။
” အစိမ်း ( အမေရိကန်ဒေါ်လာ ) ရောင်းတယ် ဝယ်တယ် အမ ”
” ပစ္စည်းမှန်တယ် ဈေးမှန်တယ် အမ ”
အင်း .. စပ်စုချင်တဲ့ ကျမရဲ့ အကျင့်ကြောင့်
” ဘယ်ဈေးပေါက်လဲ ”
အယ်.. မဆိုးဘူးဘဲ ။
တစ်ကယ်တော့ ကျမက သန်ဘက်ခါဆို အပြင်ထွက်မှာမို့SUN FAR မှာ လေယာဉ်လက်မှတ် လာဝယ်တာပါ ။
SUN FAR မှာ မြန်မာ ကျပ်ငွေနဲ့ ဘဲ ဒေါ်လာဈေးပေးပြီး တိုက်ရိုက် ဝယ်ယူနိုင်ပေမဲ့ ပြောခဲ့သလိုဘဲ စပ်စုတတ်တဲ့ အကျင့်နဲ့ နှစ်ဆယ်လောက် ကွာနေတာကိုတွေးမိသွားတဲ့ လောဘ ရယ်ကြောင့် ဒီမှာဘဲ ဒေါ်လာဝယ်ပြီးတော့မှ လေယာဉ်လက်မှတ် သွားဝယ်ဖို့စိတ်ကူးပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ် ။
” ကျမ နည်းနည်း ဝယ်ချင်တယ် ”
” ဟုတ်ကဲ့ အမ လိုချင်သလောက်ရတယ် လိုက်ခဲ့ပါ ”
အဲ့ဒီလူက ရှေ့ ကနေဦးဆောင်ပြီး ဆူးလေပန်းခြံထောင့်က ကြံရည်ဆိုင်လေးကိုခေါ်သွားပါတယ် ။
ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း လူတွေတဖွဲဖွဲနဲ့ စည်ကားသိုက်မြိုက်နေတာပါဘဲ ။
” ဒီမှာ အေးအေးဆေးဆေး အလုပ် လုပ်လို့ ရတယ် အမ ခဏထိုင်ပါဦး ”
ှုကျမ ထိုင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ ကျမရဲ့ဘေးကို လူတွေတစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ဝိုင်းထိုင်လိုက်ကြပါတယ် ။ စုစုပေါင်း ခြောက်ယောက် ။ ကျမ စိတ်ထဲထင့်သွားပြီ ။
ကျမ ကိုဦးဆောင်ပြီးခေါ်လာတဲ့လူကတော့ ခဏစောင့်ဆိုပြီး ငါးမီးနစ်ခန့် ကြာတော့ ပြန်ရောက်လာပြီး ကျမနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ခုံမှာ ဝင်ထိုင်ပါတယ် ။
” အမ ဘယ်လောက် ဝယ်မှာလဲ ”
” သုံးရာ ”
သူလှမ်းပေးတဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်ရာတန်သုံးရွက်ကို တစ်ရွက်ချင်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့
” အမ် ” ( အသံတိတ်ထွက်သွားတဲ့ Candle ရဲ့ အာမေဋိတ် )
အမေရိကန် သမ္မတ Benjamin Franklin ရဲ့ မျက်နှာက တစ်ခြမ်းက ထူပ်ိန်းပိန်းဖြစ်နေပြီး တစ်ခြမ်းက ခပ်ပါးပါးဖြစ်နေတယ် ။
ကျမကိုဒေါ်လာ အတု သုံးရွက်ပေးတာဘဲ ။ အတုတောင် အဆင့်မမှီတဲ့ အတု ။
အိုကေ ။ ရှိစေတော့ ။
ကျမကို လူတွေဝိုင်းထားလိုက်ကတည်းက တစ်ခုခုဘဲဆိုတာကို ကြိုတွက်ထားပြီးသား ။
ကျမ တစ်ချက်ပြုံးလိုက်ရင်း သူ့ ဒေါ်လာတွေ ပြန်ကမ်းပေးလိုက်ပါတယ် ။
” ကျမက ပစ္စည်းအမှန်ဘဲ လိုချင်တာ ဒီကနေ SUN FAR ကိုတိုက်ရိုက်သွားပြီး လေယာဉ်လက်မှတ် ဝယ်မှာမို့ လို့ ”
သူ ဘာမှ ဆက်မပြောပါဘူး ။ ခဏစောင့်ဆိုပြီးပြန်ထွက်သွားပါတယ် ။ ကျန်ခဲ့တဲ့ လူခြောက်ယောက်ထဲက ကောင်လေးတစ်ယောက်က
” ကျွန်တော်တို့ က တစ်ဆင့်ယူပြီး ပြန်လုပ်တာ အမ.. ဒါ့ကြောင့် တစ်ခါတစ်လေ ပစ္စည်းက အဲ့ဒီလိုဘဲ အထေ့အငေါ့လေးတွေရှိတတ်ပါတယ် ”
ကျမ သူ့ ကိုခပ်တည်တည်နဲ့ တစ်ချက်စိုက်ကြည့်လိုက်ရင်း
” အင်းပေါ့ ခုခောတ်မှာ စီးပွားရေးကို လည်သလိုလုပ်စားနေကြရတာဘဲ မဟုတ်လား ”
ကောင်လေး ဘာမှဆက်မပြော ။ ကျန်လူများကတော့ စကားတွေဖောင်ဖွဲ့ နေကြလေရဲ့ ။
သူတို့ တစ်ဖွဲ့ တည်းဆိုတဲ့ ပုံတွေ မပြပေမဲ့ ကျမကတော့ ရိပ်မိပြီးသားပါ ။
ငါးမီးနစ်ခန့် ကြာပြီးနောက် ဟိုလူပြန်ရောက်လာပြီး ကျမကို တစ်ရာတန်သုံးရွက်ကမ်းပေးပါတယ်။ စစ်ကြည့်လိုက်တော့ အနည်းငယ်နွမ်းနေပေမဲ့ ဒီတစ်ခါတော့ လုံးဝ အမှန် ။
ဒါနဲ့ကျမ လက်ကိုင်အိတ်ထဲက တစ်ထောင်တန် သုံးအုပ် (ဘဏ်အုပ် ) ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
အဲ့ဒီလူက လှမ်းယူပြီး ဘေးနားက လူတွေကို တစ်အုပ်စီ ပစ်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ငွေစစ်ဖို့ ပါ ။
” အမ ကျွန်တော့ ဒေါ်လာကို နံပါတ်လေးမှတ်ချင်လို့ ဝိုင်းမှတ်ပေးပါဦး ”
သူကတစ်ရွက် ကျမက နှစ်ရွက်နံပါတ်မှတ်ပြီး သုံးရွက်လုံး ကျမလက်ထဲမှာ ပြန်ယူထားပါတယ် ။
” ကျွန်တော်တို့ စစ်ပြီးပြီ အမ ဒီတစ်အုပ်က နှစ်သောင်းလျော့တယ် ”
” ဒီတစ်အုပ်က နှစ်သောင်းခြောက်ထောင်လျော့တယ် ”
” ဒီတစ်အုပ်က တစ်သောင်းနှစ်ထောင်လျော့တယ် ”
ဆိုပြီး တစ်ထောင်တန် သုံးအုပ် ပြန်ထိုးပေးပါတယ် ။
” ဟိုက် ” ( Candle ရဲ့အသံတိတ် အာမေဋိတ် )
အဲ့ဒီမှာ စတွေ့ တာဘဲ ။ စပ်စုချင်အုံး မိ Candle ရေ ။
တစ်ခုလိမ်လို့ မရတော့ နောက်တစ်ခု ရိုက်ပြီဘဲ ။
ကျမ အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာဘဲ သူတို့ ကိုတစ်ချက်ပြုံးပြလိုက်တယ် ။ ( တစ်ကယ်တော့ ရင်ဘတ်ထဲမှာ ဗြောင်းဆန်နေပြီ ။ ဒေါသစိတ်ရော ။ ကြောက်စိတ်ရော ။
” ကျမ ရိုးမဘဏ်ကထုတ်လာတာ တစ်နာရီဘဲကြာသေးတယ်..အဲ့ဒီမှာလဲ အသေအချာ စစ်လာပြီးသား လျော့နေတယ်ဆိုတာ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ဘူး ”
” အမရှေ့ တင်ဘဲ အခုစစ်လိုက်တာလေ ”
” ငါးသောင်းရှစ်ထောင် ထပ်ဖြည့်ပေးပါ အမ ”
မြတ်စွာဘုရား ။ တစ်ယောက်တစ်ပေါက်ဝိုင်းပြောကြပြီ ။
သူတို့ကျမ ပိုက်ဆံ ငါးသောင်းကျော် နှုတ်ယူထားလိုက်ပြီး အသေအချာဘဲ ဝိုင်းပြီးရိုက်စားလုပ်နေကြပါပေါ့လား ။
ကျမ ဘာလုပ်ရမလဲ ။ ဒီနေရာမှာ အကြောက်အကန် ငြင်းနေလို့အကျိုးမရှိနိုင်တော့ ။
အားလုံးက ဝိုင်းထားကြတယ်လေ ။ ရယ်စရာတော့ အကောင်းသား ။
မိန်းကလေး တစ်ယောက်တည်းကို ယောက်ျားရင့်မကြီး ခုနှစ်ယောက်က ဝိုင်းလိမ်နေကြတာ ။
ထွက်ပေါက်မရှိအောင်လည်း ဝိုင်းပိတ်ပြီး ထိုင်ထားကြသေးတယ် ။
” ဒီမှာ ငါက နင်တို့ ကို လာလိမ်နေတာ မဟုတ်ဘူး ”
” တစ်ကယ်တော့ ငါမှန်တယ်ဆိုတာ နင်တို့ ရော ငါရော သိပြီးသား..ငါ့မှာ အပိုပိုက်ဆံလဲ ပါမလာဘူး ”
” နင်တို့ ပြောတဲ့ငွေကို ထပ်လိုချင်တယ်ဆိုရင် ခဏစောင့်..ငါ့ အစ်ကိုဆီ ဖုန်းခေါ်ပြီး လာပေးခိုင်းလိုက်မယ် ”
ကျမ အနီးမှ အများသုံးဖုန်းဆိုင်လေးဆီသို့ ထထွက်လာခဲ့ပါတယ် ။
သူတို့ ကယောင်လည်လည်နဲ့ ကျမရဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာ ။
အမှန် ကျမလက်ကိုင်အိတ်ထဲတွင် ဖုန်းပါသော်လည်း သူတို့ ရှေ့ တွင်ဖုန်းပြော၍မဖြစ် ။ အိမ်ကို ဖုန်းခေါ်ပြီး ကျမရဲ့ အမျိုးသား ( ရင့်ကျက်အေးချမ်းလှတဲ့ ) အိမ်ဦးနတ် ကို တိုတိုတုတ်တုတ် ရှင်းပြလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ သူက
” အန္တရာယ်များတယ် ထားခဲ့လိုက်တော့တဲ့..ညနေမှ လက်မှတ်ဝယ်..ကျန်နေတဲ့ ကိုယ့်ပိုက်ဆံ ကိုယ်ယူပြီး ကားငှါးပြန်လာခဲ့တော့တဲ့..”
ကျမ ဖုန်းချလိုက်တယ် ။ စက္ကန့် ပိုင်းအတွင်း အပြေးအလွှား စဉ်းစားရပြီ ။
မတရားသဖြင့် ဝိုင်းအနိုင်ကျင့်တာခံရမှာလား ။ မဖြစ်နိုင် ။ ကျမရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို အလဲထိုးမခံနိုင် ။ ကျမ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု ချပြီး ခုန နေရာကို ခပ်တည်တည်နဲ့ ပြန်လျှောက်လာခဲ့တယ် ။
” ငါ့အစ်ကိုက အခု စခန်းမှာ တာဝန်ချိန်ဖြစ်နေလို့ မလာနိုင်ဘူး .. ငါ့ လက်မှတ်ကလဲ အခုဝယ်မှ ဖြစ်တော့မယ်..”
” ငါ့ ပိုက်ဆံကို အတိအကျပြန်ပေးမလား..ဒေါ်လာသုံးရာဘဲ ငါယူသွားရမလား ..ကြိုက်တာရွေး..သေချာတာကတော့ နင်တို့ ကိုငါတစ်ပြားမှထပ်မပေးနိုင်တော့ဘူး ”
” အမ လက်မှတ်ကို ဒေါ်လာယူပြီး အရင်သွားဝယ်လိုက်ပါ..ပြန်လာမှ ဒီကိစ္စကို ဒီမှာဆက်ဆွေးနွေးကြတာပေါ့ ”
” ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်တို့ ပစ္စည်းမှန်ကြောင်းကိုတော့ သေချာအောင် လူတစ်ယောက်ထည့်ပေးလိုက်မယ် ” ( သူတို့ ကိုပြန်လိမ်မှာတော့ ကြောက်သားနော် )
” ရတယ်လေ..ပြီးရင် ငါ ဒီနေရာကို ပြန်လာခဲ့မယ် ”
ကျမ ဆူးလေ ပန်းခြံကနေ SUN FAR ကို ငါးမီးနစ် လမ်းလျှောက်ရင် ရနိုင်ပေမဲ့ တစ်ထောင်ကျပ် ပေးပြီး တက္ကဆီ ငှါးလိုက်ရပါတယ် ။
ဘေးနားမှာ သူတို့ ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ အဖော်တစ်ယောက်နဲ့ ပါ ။
လျောလျောရှူရှူ လက်မှတ်ဝယ်အပြီး ခုနနေရာကို လမ်းလျောက်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ် ။
အဲ့ဒီ အဖော်ကို လမ်းမှာ အစ်အောက်မေးကြည့်လိုက်တော့ သူ့ နာမည်က ကိုခင်မောင်လတ် (ph.0943063874 ) ။ ကျမကို ဦးဆောင်ပြီးလိမ်တဲ့သူနာမည်က ညီညီနိုင် ( နာမည်ပြောင်းထားခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည် ) ။
အိုကေ ။ ကျမဘက်က ရှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုံန်းတော့ နိုင်နေပြီ ။
ဟန်ကိုယ့်ဖို့ နဲ့ မာန်ဆက်တင်း ရတော့မှာပေါ့ ။
” ကဲ ..ညီညီနိုင် ဘာဆက်ဆွေးနွေးမလဲပြော ” ( သူ့ နာမည် တပ်ခေါ်လိုက်တော့ ဘေးက အဖော်ကို ဆက်ကနဲ တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ် )
” အမ ပိုက်ဆံ ငါးသောင်းကျော်လုံး မဖြည့်ပေးနိုင်ရင်တောင် ကျွန်တော်တို့ ကို နှစ်သောင်းလောက်တော့ ထပ်ပေးပါ ”
” ပြောပြီးပြီ ..တစ်ပြားမှထပ်မပေးနိုင်ဘူးလို့ ..နင်တို့ငါ့ကို ဒီနေရာကနေ သွားခွင့်မပေးရင်တော့..ငါ့ အစ်ကိုကိုမဖြစ်မနေ ထပ်ပြီး ဖုန်းခေါ်ရလိမ့်မယ် ”
ကျမ အခုမှ လက်ကိုင်အိတ်ထဲက ဖုန်းကို ထုတ်ယူလိုက်ပါတယ် ။
” အမ ရယ် .. အမ အစ်ကို ဆိုတာနဲ့ တော့ ခဏခဏ မခြိမ်းခြောက်ပါနဲ့ ..ကျွန်တော်တို့ က ရမလားလို့ ထပ်ပြီးညှိကြည့်တာပါ ..မရရင်လည်း ကိစ္စမရှိပါဘူး အမ သွားလို့ ရပါတယ် ”
” ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ” ဟုပြောပြီး ထိုနေရာမှ ကျမ လှည့်ထွက်ခဲ့ပါတော့တယ် ။
အဓိပတိ အထူးလိုင်းကား ထိုးဆိုက်လာတာနဲ့ ချက်ချင်း ကားပေါ်တက်ထိုင်လိုက်တယ် ဆိုရင်ဘဲ ဒူးတွေရော လက်တွေပါ တဆတ်ဆတ် တုန်နေပါတော့တယ် ။
မှတ်ချက် ။ ။ လွန်ခဲ့သော တစ်နှစ်ခွဲမှ ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ။
ယခုတော့ ဒေါ်လာ အရောင်း အဝယ်စင်တာများနှင့် ပို၍ အဆင်ပြေနေပြီဟုသိရပါသည် ။
Candle ပြောခဲ့သော တာဝန်ချိန်နှင့် အစ်ကို ဆိုသည်မှာ Candle ၏ ဖိန့် လုံး သက်သက်သာဖြစ်ပါသည်။ ။
လိမ်တဲ့သူတွေကိုပြောတာလား ဖိန့် ခဲ့တဲ့ သူကိုပြောတာလား
ပထမဆုံး ဝင်ရောက် အားပေးသွားတဲ့
ဦးကြိမ် ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ။
အဲဒီနေရာ မှာ.. ငွေ လဲ ဖူးတယ် ။
လိမ်ဆင်တွေ အမျိုးမျိုး ကြုံ ရ လွန်းလို့ …
အဲဒီနေရာကို မသွား ရဲတော့ဘူး ။
သူတို့ က ဈေးပိုပေးတော့
candle အထင်တော့ တစ်ယောက်လာရင် တစ်မျိုးနဲ့ မရိုးအောင် လိမ်နေကြပုံရပါတယ် ။
မဟုတ်​မခံစိတ်​ဓာတ်နဲ့ သတ္တိ​ကို ​လေးစားချီးကျူးပါတယ်​။ဒါ​ပေမယ့်​ကိုယ့်​အန္တရာယ်​ကို​တော့ အမြဲသတိ
ထားပြီး တုံ့ပြန်​ပါ ခင်​ဗျာ။
သတိပေးလို့ ကျေးဇူးပါ ကိုကျော်ထိုက်ရေ
နောက်တစ်ခါတော့ ဆင်ခြင်ပါ့မယ် ။
များသောအားဖြင့် လိမ်တဲ့လူတွေက လူကဲခပ်ပညာလည်းတော်ကြတယ်။
တစ်ခုစဉ်းစားမိတာ….. ဟိတ်ဟန်နဲ့ပြောနေတုန်း အသံတုန်မသွားတာ ကံကောင်းတယ်။
ကိုယ်တိုင်သာဆို အဲလိုလိမ်ညာတတ်တာ သိနေလို့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ စည်းရုံးစည်းရုံး စမ်းကို မစမ်းကြည့်ရဲတာ။
ဟုတ်တယ် မမ ရေ ။
ကြုံလာမှတော့ ရှင်းရတော့မှာဘဲဆိုပြီး အားတင်းခဲ့ရတာ
Ko Kaung says:
.. ဆိုတဲ့ စကားကို လက်တွေ့ ဖတ်လိုက်ရတာပဲဗျ။
တကယ်ကို တော်ပါပေတယ် မကန်ဒယ်။
အထင်ကို ဆက်ပြောရရင် အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ ခပ်ပြုံးပြုံး မျက်နှာပေးနဲ့ အိမ်ဦးနတ်ကို ကြွားလုံး ထုတ်ဦးမယ် ထင်တယ်။
ရန်ကုန်မှာ လူလိမ်တွေက အတော်ပေါသဗျ။
ဖိန့်လုံး၊ ဟန့်လုံး၊ ခြောက်လုံးတွေနဲ့ လုပ်စားနေကြတာများတယ်။
ဒီလူတွေထက် ပိုဖိန့်နိုင်၊ ဟန့်နိုင်၊ ခြောက်နိုင်ရင်တော့ နိုင်ပါတယ်။
Ko Kaung ရဲ့ အထင် မှန်ပါ့ရှင် ။
အိမ်ဦးနတ်ကိုခပ်မိန့် မိန့် ဘဲကြွားပစ်လိုက်တာပေါ့ ဘာရမလဲ ဟဲဟဲ ။
တား .. တား .. တားအထင်ရော ..
(ဟကောင် … မင်းက ဘာထင်လို့ မှန်ဒလား မေးနေရဒါဒုံးဟ)
ကလး က.. ကလေးလိုဘဲနေမှပေါ့ကွယ် ..
(ကြုံတုန်းလေး နှက်လိုက်ထှာ )
တစ်ကယ်တော့ သတ္တိရှိခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး ကို kyeemite ရေ
ချောင်ပိတ်အရိုက်ခံရလို့ ပြန်ကိုက်ခဲ့ရတဲ့ သဘောပါ ။
မုသာဝါဒ ကံတစ်ပါး ကိုအသေအချာချိုးဖောက်ခဲ့ရလို့ 
စိတ်ထဲတော့ ကသိကအောက်နိုင်လွန်းလှပါတယ် ကို Garfield ရယ် ။
အဲဒီနားက လူတွေက အတော်မလွဲတာတော့ အမှန်ဘဲဗျာ။
ကျွန်တော် အသိမိတ်ဆွေတစ်ယောက်လည်း ဒေါ်လာ ရောင်းမယ်ဆိုပြီး ဈေးမေးတော့ သူတို့ပြောတဲ့ဈေး ကြိုက်တာနဲ့ မိတ်ဆွေကရောင်းမယ်ဆိုပြီး ဒေါ်လာ ၁၀ ရွက်ထုတ်ပေးတယ်၊ အဲဒီ ၁၀ ရွက် လှမ်းယူပြီး ပိုက်ဆံမပြည့်လို့ ခဏလေးသွားယူနေတယ် ဆိုပြီးစောင့်ခိုင်းထားရာက နောက်တစ်ယောက်လာတော့ အခုလေးတင်ဈေးပြောင်းသွားလို့ ဘယ်လောက်ဘဲပေးတော့မယ်ဖြစ်ရော။ အဲဒါနဲ့ မိတ်ဆွေကလည်း မရောင်းတော့ဘူးဆိုပြီး ခုန ဒေါ်လာ ၁၀ ရွက်ဘဲပြန်ပေးဆိုတော့ ခုနပေးတဲ့ထဲက ၂ ရွက်က အနွမ်းပြန် ပါလာလို့ ပေးထားတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူး မိတ်ဆွေကပြောတာကို ဟုတ်ပါတယ် အတင်းငြင်းတယ်လေ၊ ဒါနဲ့ဘဲ မိတ်ဆွေက အိတ်ထဲကစာအုပ်လေးထုတ်ပြီး ဒီမှာနံပါတ်မှတ်ထားတယ် မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတော့ ဟိုလူဆီမှာလို ဒီလိုဆီမှာလိုလုပ်နေလို့ မင်တို့ဒီနေရာမှာ အေးဆေးဆက်လုပ်စားချင်ရင် ပြန်လဲပေး လိုက်ပါ ၀င်ပြောတော့ ခင်ဗျကဘဲကလဲတဲ့ ဘယ်ကလဲမနေနဲ့ သိချင်ရင်လိုက်ခဲ့ ငါအခု အဲဒီ တရားရုံးချုပ်သွားမှာလို့ပြောတော့မှ ခဏလေး ပြန်ကြည့်လိုက်အုံးမယ်ဆိုပြီး အိတ်ထဲက ပြန်ထုတ်ပေး တယ်၊ အဲလိုဘဲဗျ – ၃-၄ နှစ်လောက်ကပါ။( အမှန်တော့ တရားရုံးချုပ်မှာ အသိရှိလို့ ၀င်လည်မလို့ပါ )။
အဲ့ဒီနားမှာ ဝင်မလာနဲ့ ရတဲ့နည်းနဲ့ ရိုက်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေချည်းဘဲထင်ပါတယ် ကိုခင်ခ ရယ် ။
နောက်ကြုံ မှ ကျောက်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး candle ရဲ့ အိမ်ဦးနတ်လည်း ခံရမလိုဖြစ်ခဲ့တာလေးကို တင်ပါဦးမယ် ။
လာဖတ်သွားပါ၏…အင်းးးကင်ဒယ်ဆိုတော့…ကျနော်ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်နေလားးလို့…ဟဲဟဲ..
ကျနော်တို့ အဖွဲ့လေးနာမည်က One Candle လေ…. အတင်းကြော်ငြာဝင်ပြီ…..။
အားပေးသွားတဲ့ ကိုထွန်းဝင်းလတ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
one candle အဖွဲ့ ရဲ့ ပရဟိတ အလုပ်တွေ အလှူတွေအကြောင်းကိုတော့
ကြေငြာမဝင်ခင်ကတည်းက ကြားဖူးနေလို့ လေးစား အားကျနေခဲ့ရတာပါ ။
ရင်ထဲမှာတော့ အရမ်းကြောက်နေခဲ့ရတာပါ အံတီ ပဒုမ္မာရယ် ။
အမှန်ကိုဝယ်ပစ်လိုက်မယ်.. ( ဒို့ ရွာသူားတွေအတွက် အိုင်ဖိုက် တစ်ယောက်တစ်လုံး )
အားပေးသွားတဲ့ ဦးကြောင်ကြီး ကိုလည်းကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ်နော် ။
မမ candle ရေ.. ကြုံလာတဲ့ ပြဿနာကို ဖြတ်ထိုးဥာဏ်နဲ့ ဖြေရှင်းသွားတာ တကယ်ကို ပညာရပါတယ်။ ဖိန့်လုံးနဲ့ ဖြေရှင်းခဲ့တယ်ပြောလည်း တကယ်ကြုံလာရင် အဲလိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ မလွယ်ဘူးလို့ ထင်တာပဲ။
ဝင်ရောက် အားပေးသွားတဲ့ Nyine Nyine ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော် ။
လောဘသားကောင်များကိုနည်းအမျိုးမျိုးနဲ့လိမ်နေကြတာပါ ၀ယ်ဈေးကိုလည်း သားကောင်အကြိုက် ဈေးပေး
ပြီးမှ မပြည့်တဲ့ထောင်အုပ်နဲ့အလုပ်လုပ် ရောင်းဈေးကိုလည်းလျှော့ပြော ပြီးတော့အတုနဲ့ရော
၁။ ဟယ်ဗင်လမ်း ထိုင်းနိုင်ငံသံရုံးအနောက်
ခြံအမှတ်၇၄ မနော်ဟရီလမ်း ဒဂုံမြို့နယ် ph 098624593 0973060919 095169197 01218148
မှာဒေါ်လာဈေးနှုန်းကိုလည်း အချိန်နဲ့တပြေးညီစုံစမ်းလို့ရတဲ့ ၀၈၀၀-၀၇၃၀pm
Northern Breeze Art Gallery EXCHANGE SERVICES ပါ
၂။ ဗိုလ်ချုပ်ဈေး အောက်ထပ် ကောက်ရိုးပန်းချီတန်း မှာ မေးရင် ဒေါ်လာအရောင်းအ၀ယ်လုပ်နေတဲ့ကောင်လေးကိုညွှန်ပြပါလိမ့်မယ် သူကနှစ်ရှည်လများနိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ စိတ်ချရတဲ့ကောင်လေးပါ ပေါက်ဈေးအမှန်ရပါလိမ့်မယ် ဗိုလ်ချုပ်ဈေးလိုနေရာမှာက မဟုတ်တဲ့သူနေရာမရဘူး
ဆူးလေတ၀ိုက်ကတော့ လောဘသားတွေကိုကျုံးသွင်းပြီး နေအေးဓါးပြတွေကြီးစိုးနေတဲ့နေရာဆိုတော့ လူကောင်းတော်တော်များများရှောင်ကြပါတယ်။
ကျေးဇူးပါ Deparko နောက်ဆို ဆူးလေနားမှာ
မဖြစ်မနေ အလုပ်ကိစ္စရှိရင်တောင် အတော်လေးသတိထားရတော့မှာဘဲလေ ။
ကိုယ်တွေ့ သင်ခန်းစာလေးပေါ့ ။